LightDM GTK + Greeter 1.6.0 Misy | Avy amin'ny Linux
Sean Michel Davis, izay mitazona na mandray anjara tetikasa samihafa como el Poisson-chat, MenuLibre, Xubuntu y LigthDM GTK +, nanambara ny fisian'ny kinova 1.6.0 an'ny farany miaraka amin'ny fanatsarana ny fahitana tena tsara.
Avelako eto ambany izy ireo:
Tiako ny fisehon'ilay lohahevitra Greybird, manome toetra bebe kokoa an'i Xubuntu. Amin'ny fanambarana ofisialy dia afaka mahita antsipiriany misimisy kokoa ho an'ireo mpamorona sy mpanakanto ianao.
LightDM GTK + Greeter 1.6.0
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » LightDM GTK + Greeter 1.6.0 Misy
Tsotra sy tsara tarehy 😀
Avy amin'ny mpamorona Catfish ve izany? Ny interface vaovao azy dia tsara. Azo antoka fa manana tsiro tena tsara izy io.
Raha ianao no developer Catfish ary koa ilay developer Parole vaovao avy amin'ny version 0,3.
ary ahoana ny fametrahana azy?
Raha Greybird no sary farany, eny, sarobidy 😀
Azo apetraka amin'ny debian ve izy io?
Eny, satria eo amin'ny launcpad izy io ary azonao ampiasaina ny PPA (raha mampiasa Debian ianao dia misoratra anarana ny lakilem-bahoaka aloha ary avy eo manampy ny repo Ubuntu 12.04 LTS ianao, avy eo manome ny console «apt-get update && apt- mahazoa fanavaozana »ho faka ary amin'ny fomba fampidiranao ny jiro).